Dị ka na ọtụtụ mobile egwuregwu na dị, RPG ma ọ bụ ọrụ na-egwu egwuregwu na-aghọwanye-ewu ewu, na n'ihi nke a ọzọ na ndị ọzọ RPG egwuregwu na e kere. Ya mere, n'ihi na abawanye na ha na-ewu ewu, ọrụ chọrọ ịmata nke egwuregwu na-ndị kasị mma na-egwu.
Ya mere, ndị na-esonụ ndepụta e weere na-egosi nke RPG egwuregwu na-atụle n'elu 50, na ndị ma free ma ọ bụ na-akwụ na-egwu egwuregwu na Android ngwaọrụ.
1. Celestia - Broken Sky
Ahịa: $ 1.21- $ 122.38 kwa ihe
Mee otu ìgwè nke ndị dike maka ọgụ. Gbapụta Earth dị ka gị na ìgwè ndị dike na-alụ ọgụ ndị dị iche iche mmụọ ọjọọ. Anakọta ha elemental nkà iji nyere gị na ìgwè ndị alụso, dị ka ị na-akụkụ a na fantasy gameplay edinam.
2. Final ifo
Ahịa: $ 2.33- $ 120.43 kwa ihe
Ọjọ a egwu a n'ala a kpọrọ Fantasia. Iji kpara ube nke Aesop ịmaliteghachi iji, na-alụ ọgụ iji zọpụta Fantasia. E nwere 100 nkebi na-aga site na ịtụnanya combos usoro gameplay. I nwekwara ike na-anakọta trading kaadị nke ọkacha mmasị gị akụkọ ifo.
3. Kpatụ Titan
Ahịa: $1.70 - $85.85 kwa ihe
Ibibi titans iji mee ka udo n'ala. Enweta iku dike, agha, slay na-aga site na nke a njem. E nwere 10 n'ógbè n'ihi na ị na-aga site, na tournaments n'ihi na ị ka mpi. Iji melite gị ngwá agha ị ga-kpọọ 30 arịa, na nke a na-arụ ọrụ na gị ike.
4. Agha Camp
Ahịa: $ 1.21- $ 124.69 kwa ihe
Alụ ọgụ na dragons na ezì ọhịa. Ụwa a m jupụtara mebere oge ochie evils na nnukwu anụ na-kpara. Etolite a troop nke ibe Rangers ma na-azụ a ogologo anụ otu na bụ ike. Ịbụ akụkụ nke a agha na-achịkwa ya na ozugbo.
5. iju Future Ọgụ
Ahịa: $ 3.39- $ 113.53 kwa ihe
Mepụta gị otu nke na-abọ ọbọ. Kpọkọtaram ha na-anabata a nsogbu oku si Nick ikwo ekworo. -Akụkụ na 3 na 3 ọkpụkpọ agha na irite boosts na pụrụ iche bonuses na gị otu. Ma ọ bụ nwere ike ị chọrọ na-alụ ọgụ dị ka otu ọkpụkpọ ka Ị kpọghee ekwt ọhụrụ ekike na-enweta ụgwọ ọrụ.
Ahịa: $ 1.23- $ 125.6
Bụrụnụ ndị na-a w dike. Jiri edinam ọgụ gameplay itinye aka na a firefight. Ka ị na-enwe ọganihu site egwuregwu ị ga-ewuli elu gị panda na-kasịnụ fighter. Ike a pụrụ iche fighter ka olulu megide ndị ọzọ egwuregwu.
Ahịa: $0.77 - $54.31
Họrọ gị anụ ngwá agha ahụ, sonyere n'agha. E nwere ise ọcha na collided n'ụwa nke na-bụ mara mma, na ị ga-eme ka ụzọ gị site na ya site na-alụ ọgụ na-emegide, ka unu wee na-aghọ Onyenwe anyị nke Pixelmons. Ị ga-mkpa ịmụta otú ịchịkwa onye ọ bụla nke ọcha, otú i nwere ike echepụta agha si eme ndị na-onye gị.
Ahịa: $1.22 - $22.31
Nke a bụ ọrụ na-egwu mebere ụwa. Na-eme enyi na-ewu ụlọ a na pixel nkà ịke egwuregwu. Ịbụ akụkụ nke obodo na-agụnye onwe gị na asọmpi na-eme kwa ụbọchị. Trade ihe, ikori ka enyi, fechapụta na gị onwe gị ụwa nke ị mepụtara na-esi mara ọtụtụ nde afọ iri na ụma gafee ụwa.
Ahịa: $1.02 - $41.06
Mepụta na chepụta eserese gị n'ihi na nke a 3D mebere ụwa. Ị ga-mkpa na-elekọta 17 iji ịdebanye aha maka egwuregwu a. Ebe i nwere ike na-akpakọ na-eme ka enyi na izute ọhụrụ ndị mmadụ. Nke a bụ a mebere ebe mebere ndị mmadụ.
10. Monster ije
Ahịa: $0.87 - $113.5
Evolve na agha na gị ogologo anụ squad. Izute na-alụ ọgụ dị iche iche iro n'ụzọ, dị ka ị Ị kpọghee ekwt dị iche iche nnukwu anụ ma soro ha site dịgasị iche iche. E nwere 500 nnukwu anụ na-anakọta na onye ọ bụla n'ime ha enwe dị iche iche àgwà.
11. Iwe nnụnụ Epic RPG
Ahịa: $0.74 - $109.88
Nke a bụ iwe anụ ufe na ngwá agha. E nwekwara nzuzu naaa, ọjọọ ụmụ okorobịa na anwansi. Chọta onwe gị na The Epic okwu na The Epic ngwá agha na upgrades. Egwuregwu nakwa dere na-akpa ọchị na-agụ akụkọ na ike ga-uwe elu na-enweghị isi na ekike na imefe ngwá agha. Dị ka gị na feathered enyi ime agha na onye ọ bụla ọzọ.
12. Summoners Agha
Ahịa: $1.17 - $206.7
Fantasy RPG egwuregwu. Mpi megide nde 30 ma ọ bụ karịa Summoner si gburugburu ụwa. Ime agha nke elu-igwe arena maka a akụ akpọ Mana kristal. E nwere ihe karịrị 800 nnukwu anụ ka a kpọọ na n'ihi na ị na-alụ ọgụ megide.
Ahịa: $4.30 - $88.94
Welienụ, ụgbọ okporo ígwè na mpi na gị dragon. Bụrụnụ ndị na-kasịnụ dragon ọzụzụ na-ebili site n'ohu. Ịhọrọ gị dragọn ahụ na hazie ya. Idebanye aha na akwụkwọ nke ga-ekwe ka ị mpi na ụmụ akwụkwọ ibe si n'akụkụ nile nke ụwa.
14. Njikọ nke mmụọ ozi - Fire Raiders
Ahịa: $ 5.99- $ 120.15
Lụọ n'akụkụ gị dike imeri Ekwensu Army. Mụta anwansi spells na-alụ ọgụ na egwuregwu ndị na-mgbagwoju anya dị ka a Nwere Obi Ike warrior. Bụrụnụ ndị na-a akụkọ na gị enwekwukwa ngwá agha, na palitere agha gị otú ha nwere ike nwua onye iro gị dị ka ị na-alụ ọgụ ndị a na-akpali akpali egwuregwu. -Akụkụ na The Epic agha na-egwu na-egwuregwu ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị nwere ike ịbụ ihe dị ike karịa gị.
15. Stickman onyeisi egbu egbu
Ọ bụrụ na ị chọrọ igbu gị onyeisi mgbe ahụ egwuregwu a bụ maka gị. Egwuregwu a nwere ụzọ ise igbu gị onyeisi, na nza nke ọbara na fantasy fun. Kpebie nke jụrụ-amasị gị ma họrọ ya, na mgbe hụ ihe merenụ.
16. na-abọ ọbọ - ebibi
Ahịa: $1.14 - $34.97
Lụọ gị n'akụkụ. Ime agha na Orcs, looting ahịa na ndị na dragons. The agha bụ breathtaking na polishing nkà gị ga-enyere gị mma, na kwa ikori ka ndị ọzọ Player na ozugbo. Nkwurịta okwu na ndị ọzọ Player bụ ihe egwuregwu a bụ ihe niile banyere. Niile nnukwu anụ na egwuregwu a ndị pụrụ iche na-akpali.
17. Rush nke Heroes
Ahịa: $1.18 - $119.8
Mepụta a otu maka agha. -Akụkụ na 150+ ọchịchọ zones na imeri n'agha ebe. Ị ga-enwe ike inweta karịrị 160 ikike na pụrụ iche nkà, na nna gị azu na Ngwuputa occupations. Ị pụrụ ọbụna ịhọrọ site n'elu 1200 ihe, nke na-agụnye agha na ngwá agha.
18. oche Heroes
Ahịa: $ 0.98 - $99.61
Mepụta a hoard nke dike na kpokọtara kere eke. All na oche nke kaadị ndị pụrụ iche na e nwere n'ihi na ị na-anakọta. Hapụ onwe gị na agha na ụwa nke oche dike nke bụ omimi na ebube. Gaa na ihe njem na emikpu onwe gị na egwuregwu mgbagwoju anya, ọnwụnwa, mazes na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
19. Ụwa nke Warriors
Ahịa: $1.29 - $124.57
Njem na ọgụ atụmatụ egwuregwu na-ewe gị gafee sara ala, otú i nwere ike akpọkọta a nnukwu agha nke akụkọ ihe mere eme kasị ukwuu dike. Were na ndị ọzọ na-emegide na ime agha na ndị dike Okpokoro Isi Agha. Ime agha na ọgbọ egwuregwu na-ahụ ma ọ bụrụ na i nwere ike si Smart gị mmegide, bụ ndị si gburugburu ụwa.
20. doggy Dog World
Ahịa: $1.23 - $125.83
Họrọ gị nkịta na-ewere ya na a rampage site na n'okporo ámá nke obodo. E nwere otu nhọrọ na chu nta akpọkwa na ị nwekwara ike ịhọrọ ẹdiana ndị mmadụ, gwongworo na ụgbọala. E nwere 4 nnukwu map na-aga site na 3 dị iche iche nkịta udiri anumanu ịhọrọ site na.
21. Galaxy Akụkọ Mgbe Ochie
Ahịa: $5.03 - $100.97
Space agha egwuregwu. -Esi galaxy, na-aghọ onye ndú i mgbe nile chọrọ ịbụ. Mepụta fleets ma na-eme agha na ndị ọzọ fleets. Nke a galactic n'ọgbọ agha ga-enyere gị na-egwu na-enwe kwa izu tournaments, ma ị nwere ike nweta nkwalite gị nsoro na ikike.
22. Ezek PZ RPG
Ahịa: $1.02 - $101.69
Na-abaghị uru ịke clicker egwuregwu. Egwuregwu a ga-akpọ onwe ya, ihe niile ị chọrọ ime bụ ikpebi ihe na klas na ị chọrọ ịbụ na mgbe ahụ, ka egwuregwu-eme ndị ọzọ. Ị ike gị dike na ọgụ bụ adịghị agwụ agwụ. Egwuregwu a ka na-arụ ọbụna mgbe ị na-ehi ụra.
23. anụ ọhịa Quest
Ahịa: $1.32 - $33.38
Hapụ ndị enchanted anụ ọhịa ọjọọ. Ị nwere ike ime agha na anụ na snow na ọbụna na aja teren. Iji nwere onu n'elu gị na-emegide ị nwere ike nweta nkwalite gị ngwá site emecha quests. Anakọta arịa na efu akụ, dị ka ị na-enwe ọtụtụ narị nsogbu, rụzuru nke di na egwuregwu na nzuzo dị ka mma.
Ahịa: $3.10 - $109.9
Anakọta ndị a mara ezigbo mma e kere eke. Akụziri ha aghụghọ na anya mgbe ha. Mepụta gị nnọọ onwe avatar, na ịchọpụta ha eluigwe na ala. E nwere chat ụlọ na egwuregwu a otú i nwere ike na-emekọ na ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ị mepụtara a MovieStarPlanet akaụntụ ị pụrụ ọbụna-emekọ enyi niile bụ ndị na-enwe ndị a iju ma mara mma e kere eke.
25. Ụlọ Akwụkwọ nke Ọgba aghara Online MMORPG
Ahịa: $0.96 - $72.98
Ụmụaka na-free ime ihe ha chọrọ. All ndị nkụzi esiwo, gịnị mere? N'ihi na e eri site zombies. Ị nwere ike hazie gị agwa, na-azọpịa gị na-emegide na 30 ma ọ bụ karịa ọgụ Nkea na i nwere na gị olu. Lụso agha na gị umunna na ọbụna ịzụta ụlọ na-atụfu a ọzọ ma ọ bụ abụọ.
26. Pixel Dungeon
Chọọ na ulo mkporo maka ihe. Anakọta ihe na-agbalị ịchọta emere ọtụmọkpọ nke Yendor. A ga-enwekwa ihe na-anakọta nke bụ nnọọ uru, na-abịa ihu na ihu di ọku kere eke bụ ndị ga na-agbalị na-eguzo na ụzọ gị. Na-dọrọ aka ná ntị egwuregwu a ga-egbu gị ọtụtụ ugboro.
Ahịa: $1.06 - $105.69
Ichu nta nnukwu anụ ma na-atụgharị m ha ẹkekpemede. Ị bụ onye nlekọta dinta, onye nwere ọtụtụ iche iche nkà, dị ka ime nke ọzọ nlekọta dinta na egwuregwu a. Ị nwere ike evolve 1 ma ọ bụ 3 kpakpando ẹkekpemede, nweta nkwalite ha nakwa amara elu na ike elu.
28. ifo Alaeze Ukwu
Ahịa: $3.57 - $124.71
Crime syndicate egwuregwu. Nke a bụ nnukwu, kasị ufiop mpụ egwuregwu ebe ị ejedebe na-eduga, gị alaeze mezue achị. Mee ka gị na ịkwado na Mafia, n'okporo ámá òtù ndị omempụ na mpụ bosses. Ị pụrụ ọbụna ihe e kpere ndị ọzọ ndụ Player, dị ka ị na-ebili site n'ohu akpatre-aghọ nna mmiri chukwu!
29. Ejiji Girl Ike
Ahịa: $ 2.33- $ 108.98
Achụso ama dị ka ihe nlereanya. Na-arụ ọrụ dị ka a na-agụ egwú, egwuregwu celebrity na-agba egwú na ọchịchọ ịghọ ama. Ị pụrụ ịghọ ọzọ mma snow eze nwaanyị, na ị na-enwe ike-ebili ka celebrity ọnọdụ. Izute ọhụrụ ndị na-fechapụta ọzọ siri.
30. My New Ịmụ Baby Sister
Ahịa: $1.09 - $5.45
Jikọọ mama gị site ime. Nyere ya aka site n'inye ya nza nke ịhụnanya, dị ka ị na-enyere icho mma nke na-akwalite na-eji ejiji ọhụrụ gị mụrụ nwanne elu. Nye mama gị ihe ultrasound, na-emebi ya. E nwere 8 eme n'ihi na ị na-eme ma mgbe ọ na-mụrụ gị nwere ike ịtụkwasị ya a ọzọ.
Ị na a ere ahịa na-ejisie otu ìgwè ndị dike na crafters. Ị ga-eziga dike si na quests ebe ha ga-alụ ọgụ iro na-anakọta ihe. The crafters mgbe ahụ, lee ndị ihe na ike agha na ngwá agha. Ị onye ahịa bụ ọchịagha nke gị na ngalaba.
32. Kritika: The White Knights
Ahịa: $1.23 - $124.79
Alụ ọgụ RPG egwuregwu. E nwere ọtụtụ agbachitere na onye ọ bụla n'ime ha nwere a pụrụ iche set nke nkà. E nwere onye na-adịghị agwụ agwụ ife nke nnukwu anụ, e nwekwara anu ulo na-edebe site gị n'akụkụ na-enyere gị aka-esikwu ike. -Esi Tower nke mkpagbu na ya 65 ala. Na onyeisi ụwa e nwere ike bosses na ị chọrọ imeri.
33. Rise Ọchịchịrị
Ahịa: $6.06 - $121.45
Ịgbanwe n'ime ise dị iche iche fiends. Agha minions na bosses na Akụkọ ọnọdụ. Lụọ ọzọ Player si gburugburu ụwa na Mkpụrụ Obi Nweta na Arena, ma weghachi iji na udo a ọbara crystal na ga-fiends ike ma mechie ya. Ọ bụrụ na ị na-n'elu crystal i nwere ike unseal ha ike na-eme ka ha na-eme gị bidding.
34. Ọchịchịrị ndị mmụọ ọjọọ
Ahịa: $1.24 - $109.12
Ị ga-ịzọpụta ụwa. Site n'imeri ndị mmụọ ọjọọ onyenwe onye e kpọkọtara a omimi ike. -Ewepụ ọchịchị ya na-akwụsị na ya n'ịchịkwa ụwa. Site na-alụ ọgụ ya na gị Deere kpara ngwá agha ebe ị pụrụ ebili n'elu mpi.
35. Stardoll Fame Ejiji Enyi
Ahịa: $1.09 - $65.04
Nkata na ịzụ ahịa na ndị enyi. Nkata na enyi, tinye asọmpi, na-na-ekewaghị atụmatụ ma na-a Superstar. Get ịtụnanya si edozi isi na makeovers, na na na na na 300 nde ndị ọzọ na-n'anya ntutu na ejiji dị ukwuu dị ka ị na-eme.
36. Fab igbu Artist Nzuzo Ụlọ Mmanya
Ike gị tattoos. Chepụta ha wee tinye ha, dị ka ị ga-esi na-enweta ihe a egbugbu ga-ele anya dị ka. Ị ga-enwe 15 ahịa ndị na-achọ na ị na-enwe 50+ tattoos na-egwu na na. Egwuregwu a na-agụnye ihu eserese na a freestyle mode na bụ nanị.
37. Ọ KWESỊRỊ-ya Ịhụnanya? Gabriel - Otome
Ahịa: $1.54 - $77.94
Mfegharị egwuregwu. I nwetara onwe gị ọrụ na e nwere Ihọd n'ebe ahụ, onye nwere a aha dị ka a Oghere Usoro n'anya. Ya mere ugbu a ị na-ekpebi otú ị chọrọ akụkọ na-aga, i nwere ike na-emetụta ya ma kpebie ihe akpatre utịp ga-adị.
Nyere a pug aghọ a kpakpando. Ọrịa strok ya n'afọ na-eme n'aka ya Fans nwere oké show.
39. Age nke ebu agha Alaeze Ukwu
Ahịa: $ 0.99- $ 132.28
A warrior egwuregwu. Na e dere ihe RPG na mgbe a hụrụ tupu ke egwuregwu nke ụdị. Kenkwucha ọgụ na pụtara agha animations. Mee ma alaeze na-emeri gị niile iro. Jikọọ na ha jikọọ aka na ọgụ iro gị.
Ahịa: $1.54 - $7.78
Mụta mgbaghoju anya na-arụzi ụgbọala. Ị bụ dike na mkpa ka ị na-alụ ọgụ nnukwu anụ otú i nwere ike ịghọ braver, ike na amamihe. E nwere egwuregwu mgbagwoju anya na ebe inyocha, dị ka ị na-achọpụta ihe nzuzo na Aventana nwere na-enye.
41. ahurunaaya abiatibet
Nyere ndị stickman na-ezu ohi. E nwere ibu diamond na ngosi nka na mkpa ka ị na-enyere stickman na-ezu ohi ya na-esi pụọ. Nyere ya aka ịchọta a mma n'ụzọ ga-esi nke ngosi nka.
42. Final Fantasy Record n'ezi
Ahịa: $1.24 - $106.99
Relive ọkacha mmasị gị oge. Alụ ọgụ ụzọ gị site kpochapụwo oge nke ikpeazụ fantasy, nyere iji weghachi furu efu na-echeta na ịzọpụta ụwa ọzọ. Ike gị otu na itinye aka na agha nke ị nwere ike ịchịkwa eruba n'ime.
43 Home Design: Dream House
Ahịa: $0.88 - $40.24
Chepụta gị onwe gị nrọ ụlọ. Nke a-enye gị ohere simulate gị onwe gị ngwá ụlọ, hazie gị akwụkwọ ahụaja na n'ala. Chepụta ọ bụla ụlọ n'ụlọ gị, dị ka ị simulate gị nrọ n'ụlọ na 3D. Ị pụrụ ọbụna dịkwuo price nke ebe obibi gị site na-eme ihe niile a na-arụ ọrụ na ya.
44. High School Romance
Mụta banyere ịhụnanya ma na romance. Mụta ihe niile mkpa ka ị mara banyere ịhụnanya, ahuhu na romance. Izute kacha ekpo ọkụ ugbu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ, mfegharị na ha ọbụna gbasaa na ha. Egwuregwu a ga-eme ka ị a ịhụnanya ọkachamara na-akụziri unu ihe niile ị ga-achọ ịmara banyere-ada ịhụnanya.
45. dragọn ọkụ
Ahịa: $1.15 - $124.81
Weta agha na njedebe. Nke a bụ a ifo egwuregwu, ebe ị chọrọ ịga na njem inyere gị aka ndikan iro gị. Ị nwere ike akpagide bosses na ozugbo, aka ndị ọzọ egwuregwu na arena, na-alụ ọgụ ndị iro gị na-abịa gafee na Labyrinth.
46 Princess Nyere Boutique
Ahịa: $0.78 - $ 10.12
Mepụta uwe aghụghọ. Ị bụ onye eze ịkwa akwa, onye nwere ike aghụghọ n'ihi na adaeze. Ị ga-ikpokọta na egwuregwu na agba na nkà na ị nwere na-emepụta dị otú ahụ mara mma Uwe. Adaeze ga agba egwu na obi ụtọ na-isi ga-ahụ ịhụ ya, na ihe ndị kasị mma uwe na ị ga-kere ya.
47. dike Buster
Ahịa: $0.96 - $95.72
Get dike na-alụ ọgụ ọ bụla ọzọ. Ị ga-enwe ịzọpụta ụwa si ogbaaghara. Ị ga-enwe na-etolite otu ìgwè nke isii odide dị ka ị agha na triga agha ọ bụla nke dike. Onye ọ bụla dike nwere a pụrụ iche nkà nke ị ga-mkpa iji merie ndị iro.
48. Superstar Life
Ahịa: $2.46 - $124.36
Gosipụ gị onwe gị ejiji ịke. Mepụta ejiji, na na na na enyi gị, ejiji elu na-eme ndị etemeete na edozi isi nke eserese gị. Chọta celebrity ịhụnanya site na ịga si na a ụbọchị; ọbụna agbalị aka gị na dị iche iche ọrụ. Idaba onwe gị na spa-esi na gị nnọọ onwe ejiji nnyemaaka.
49. My Ụmụ - Mama & Baby Care
Ahịa: $1.07 - $5.60
Nyere mama gị site na ya ime. Nye nwa ya a saa, na-eri nri ya na-eji ejiji ya elu. Idaba mama gị na ọhụrụ nwa, idu efe nwa ọhụrụ mara mma uwe na nwere fun na-eme na gị na mama nwere ike ime.
Ahịa: $ 0.98 - $97.03
Agha na a sere n'elu n'àgwàetiti na mbara igwe. Ihe niile ị na-eme ga-achọ ka ị na-enweta. Ya mere, ị ga-enweta na-alụ ọgụ, kpatụ imeri onye iro gị, enweta iku ndị ọzọ wdg Mụta nkà na anwansi, ị ga-ọbụna nwere enweta dịkwuo gị ike.
Top 10 Games maka Android Tablet
> Resource> emulator> Top 50 Android RPG Games